﻿ क्यान्सर हुनबाट बचाउने पाँच खानेकुरा
१. ग्रीन टीः ग्रीन टीमा औषधिय गुण हुन्छ । यसमा यसमा पलिफेनाल्स र फ्लोभोलाइड्स जस्ता तत्व पाइन्छ, जसले एन्टिअक्सिडेन्ट तयार गर्छ । यहि कारण ग्रीन टीको नियमित सेवनले क्यान्सरको संभावना कम हुन्छ । यद्यपी बजारमा जथाभावी पाइने ग्रीन टी भन्दा प्राकृतिक ढंगले उत्पादन गरिएको अग्रानिक ग्रीन टी पिउनुपर्छ ।
२. चेरीः चेरी फाइबर, भिटामिन सी र पोटासियमको राम्रो स्रोत हो । चेरीको गाढा रातो रंग एन्थोसायनिन्सको कारणले हुन्छ । यो तत्वमा एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ ।
३. ब्रोकाउली, पत्ता गोभी र फूल गोभीः यसमा रहेको ग्लूकोसाइनोलेट्स खानाले आइसोथायोसाइनेट र इनडोल्समा बदलिन्छ । यो तत्वले सुन्निन कम गर्छ । शरीरभित्रको अंग सुन्निएर क्यान्सर पैदा हुन सक्छ । अतः यी सब्जीमा रहेको बीटा केरोटिन कोशिकाको आपसी संवादलाई प्रोत्साहित गर्छ, जसले असाधरण कोशिका विभाजन नियन्त्रणमा मद्दत मिल्छ ।
४. ब्लुबेरीः यो फलमा एन्टिअक्सिडेन्ट शक्ति हुन्छ । यस फलले फ्रि रेडिकल्सद्वारा डीएनएमा हुने क्षति रोक्छ । यसले मुख, स्तन, गुदा र प्रोस्टेट क्यान्सरको कोशिकालाई बढ्न दिदैन ।
५. स्याउः स्याउमा क्यूरेसटीन, एपीकेटेचिन, एन्थोसायानिन्स र ट्राइटेरपेनाइड्स जस्ता तत्व पाइन्छ, जसमा एन्टि अक्सिडेन्ट गुण भरपुर हुन्छ । यसले क्यान्सरको खतरा कम गर्छ । स्याउको बोक्रामा सर्वाधिक पोषक तत्व पाइन्छ, किनभने ८० प्रतिशत क्यूरेसटीन यसमा पाइन्छ । फोक्सो, स्तन र पेटको क्यान्सरको संभावनालाई स्याउको नियमित सेवनले रोक्छ ।
यसबाहेक स्वस्थ्य जीवनशैली, स्वस्थ्य खानपान, सक्रिय दिनचर्या, व्यायाम, योग जस्ता कुराले क्यान्सर लाग्न दिदैंन ।